You Can Win - အောင်မြင်မှုရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်
Winners don't do different things. They do things differently. #ShivKhera #Willpower
ကျွန်တော့ မျိုးဆက်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကတော့ လူတွေဟာ သူတိ
By	Moe Yan	· 10 Jan 2019
ပွဲဈေးတန်းမှာ မိုးပျံပူဖောင်း ရောင်းပြီး အသက်မွေးရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့မှာ အနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ အပြာရောင်၊ အစိမ်းရောင်တွေအပါအဝင် ရောင်စုံ မိုးပျံပူဖောင်းတွေ ရှိတယ်လေ။ ဈေးရောင်းမကောင်းတဲ့ အခါတိုင်း သူက ဟယ်လီယံဓာတ် ထည့်ထားတဲ့ ပူဖောင်းတစ်လုံးကို ကောင်းကင်ကို လွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပူဖောင်း ကောင်းကင်ပျံတက်သွားတာကို ကလေးတွေ မြင်တဲ့အခါ ကလေးအားလုံးက တစ်လုံးစီ ရချင်လာတယ်။ ကလေးတွေက သူဆီ လာပြီး တစ်လုံးစီ ဝယ်ကြတော့တာပဲ။ သူ့ရောင်းအားတွေ တက်သွားမှာပေါ့။ တစ်နေ့လုံး ဈေးရောင်းကျသွားတဲ့ အခါတိုင်း သူ ပူဖောင်းတစ်လုံးစီ ဆက်လွှတ်တင်နေခဲ့တယ်။ တစ်နေ့မှာ ပူစီဖောင်း ရောင်းသမားဟာ သူ့အပေါ်ဝတ် အင်္ကျီကို ဆွဲခံရသလိုလို ရှိတာနဲ့ လည်ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးတစ်ယောက်က မေးတယ်။ "အမဲရောင် ပူဖောင်းကို လွှတ်လိုက်ရင်လဲ အဲဒါက ကောင်းကင်ပေါ် ပျံတက်သွားမှာလား ဟင်"တဲ့။ ကလေးရဲ့ သိချင်စိတ်ပူပန်မှုကြောင့် သနားစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ ပူဖောင်းရောင်းသူဟာ "သားလေးရေ ပူးဖောင်းကို ကောင်းကင်ပျံတက်စေတာက အရောင်မဟုတ်ဘူး၊ ပူဖောင်းထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့အရာ (ဓာတ်)ပဲ ဖြစ်တယ်ကွဲ့" လို့ ချိုချိုသာသာလေး ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအခြေခံသဘောတရားဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေနှင့် သက်ဆိုင်ပါတယ်။ အရေးပါအရာရောက်တာက အတွင်းပိုင်းမှာပါ။ မြင့်တက်သွားစေတဲ့ အတွင်းပိုင်းက အရာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်သဘောထားပါပဲ။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ဝီလျံ ဂျိမ်(စ်)က "ကျွန်တော့ မျိုးဆက်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကတော့ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အမြင်သဘောထားတွေကို ပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့တွေရဲ့ ဘဝတွေကိုလဲ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ"လို့ ပြောခဲ့တယ်။
သင့်အောင်မြင်မှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ အရာဟာ သင့်ရဲ့ အမြင်သဘောထားပဲ။
ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်က လုပ်တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ တွေ့ရတာက လူတစ်ယောက် အလုပ်ရတဲ့ အခါ ဒါမှမဟုတ် ရာထူးတက်တဲ့ အခါ (၈၅) ရာခိုင်နှုန်းက အဲဒီလူရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကြောင့် ဖြစ်တယ်။ (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းသာ သူ့ရဲ့ အသိဉာဏ်နှင့် အချက်အလက်၊ ကိန်းဂဏန်းတွေကို သိလို့ ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ပညာရေးရဲ့ (၁၀၀) ရာနှုန်းပြည့် နီးပါးသော ငွေတွေဟာ ဘဝ အောင်မြင်မှုရဲ့ (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းပဲ အရေးပါတဲ့ အချက်အလက်၊ ကိန်းဂဏန်းတွေ အတွက် ရောက်သွားတာဟာ အံ့သြစရာ ကောင်းပါတယ်။
You Can Win (သင်နိုင်နိုင်တယ်)ဆိုတာ အဲဒီအောင်မြင်မှုရဲ့ (၈၅) ရာခိုင်နှုန်းအကြောင်းတွေပဲ။ Attitude (အမြင်သဘောထား) ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ အရေးအကြီးဆုံး စကားလုံးပဲ။ အဲဒီစကားလုံးဟာ မိမိရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဘဝ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝတွေ အပါအဝင် ဘဝရဲ့ နယ်ပယ်စုံနှင့် သက်ဆိုင်တယ်။ အမှုဆောင် အရာရှိတစ်ဦးဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်နေသဘောထား မရှိပဲ ကောင်းမွန်တဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိတစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်နေသဘောထား မရှိပဲ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။ မိဘတွေ၊ ဆရာ ဆရာမတွေ၊ အရောင်းသမားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ရှင်တွေဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်နေသဘောထား မရှိပဲ ကောင်းမွန်တဲ့ မိဘတွေ၊ ဆရာ ဆရာမတွေ၊ အရောင်းသမားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ရှင်တွေ ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။
သင်ရွေးချယ်တဲ့ နယ်ပယ်ကို ထည့်မတွက်ပဲ အောင်မြင်မှုရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်ဟာ အမြင်သဘောထားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်နေသဘောထားက အောင်မြင်မှုရဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဘဝအပေါ်မှာ ထားတဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို စစ်ဆေးမကြည့်သင့်ပေဘူးလား။ သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားက သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်ကို ဘယ်နည်းဘယ်ပုံ အကျိုးသက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကိုရော မမေးသင့်ပေဘူးလား။
ရည်ညွှန်း။ Macmillan India Ltd က ပြန်လည်ရိုက်နှိပ် ထုပ်ဝေတဲ့ Shiv Khera ရဲ့ You Can Win စာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၂၊ ၃ မှ စာပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ကို ဘာသာပြန်ပြီး ပို့စ် တင်လိုက်တာပါ။
Shiv Khera motivation determination 1005 Views
Iron supplement and Liver diseases သံဓါတျနဲ့ အသညျးရောဂါ
Aphthous ulcer and Fissured tongue လြှာနာ အာနာ
လူငယ်တွေ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိဖို့ နာဆာက မြန်မာလူမျိုးသိပ္ပံပညာရှင် တိုက်တွန်း